को हुन आमा ? – उजेली न्यूज
दिपक संगम थापा (रुकुम पश्चिम)
प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७८, बिहीबार १८:३६
“मलाई एउटा आमा देउ म तिमिलाई एउटा असल रास्ट्र दिनेछु” – नेपोलियन बोनापार्ट “जब बच्चा जन्मन्छ र रुन्छ त्यसबेला मात्र आमा मुस्कुराउछिन । त्यस दिनदेखी बच्चा रुदा आमा मुस्कुराउने दिन कहिलै आउदैन” – अब्दुल कलाम सानो घरसंसार सम्हाल्नेदेखी ठुला ठुला क्रान्ति र युद्धमा समेत आमाको योगदान कति छ भन्ने त सायद सबै अवगत नै हुनुपर्छ ।
मेक्सिम गोर्किले रुसि क्रान्तिमा आमाको योगदान कति थियो भन्ने कुरा आमा नामक उपन्यासमा प्रष्ट पारेका छ्न । हो, संसारमा कुनै दर्शन, वेद, बिज्ञान, ब्यक्ति र वस्तु छैन जुन आमा भन्दा असल । कुनै धार्मिक गुरु हुन या प्रोफेसर, या कुनै दार्शनिक, बैज्ञानिक वा राजनितिज्ञ नै किन नहुन सबैले आमाको महिमा गुनगुनाको देख्छौ । उनिहरुले कर्म शुरुगर्नुभन्दा पहिला आमालाई पुकारेको देख्छौ ।
त्यसैले त आमाले कहिले पनि आफ्नो सन्तानको आखामा आशु देख्न सक्दिनन । आफ्नो सन्तानलाई कहिले पनि दुख नपरोस भन्दै प्रार्थना गर्छिन । धन्य आमा जसले आफ्नो प्रशब पिडा भुलेर आफ्नो बच्चा हेर्न आतुर हुन्छिन र जन्मिने बितिकै मुस्कुराउदै पिडा भुल्दै छातीमा टास्छिन र मेरो खुसी भन्दै माया गर्छिन । अनि आफ्नो सन्तानलाई ५ वर्षसम्म एक्लै बोक्छिन, खेलाउछिन, दूध खुवाउछिन, गुनगुनाउछिन, बच्चाको तोतेबोली सहजै बुझ्छिन र बोल्छिन अनि ईसारा फर्काउछिन । बच्चा रुदा आफू पनि रुन्छिन ।
आफू भोको रहेर पनि सन्तानलाई खुवाउछिन । रोग, गरिबी र शोक सबै सबै बाट बचाउछिन । बाहिरी दुनिया बाट बचाउछिन । सन्तानलाई हुर्काउदै र खेलाउदै गर्दा आफ्नो सन्तान ठुलो भएको पत्तै पाउदिनन । कति आमाहरु त बुवाहरु बाट घरमा कति घृणा, हिम्सा, हेपाह जस्ता दुर्व्यवहार सहन बाध्य हुन्छन् । दुर्व्यवहार हुदाहुदै असल आमाहरु सन्तानकै लागि मौन बस्छ्न अर्थात सहन बाध्य हुन्छ्न । मौन अर्थात सहनुको भनेको आमाहरु कमजोर भएर बुज्छ्न पुरुषहरु । उनिहरुलाई थाहा हुन्न कि मिस्त्री र ईस्त्रीलाई असहयोग गरे घर नै बिग्रीन्छ भन्ने कुरा ।
आमा हरहिसाबले पुज्य छिन र उनलाई जति कदर गरेपनी कमै हुन्छ । आमाको मातृभाव मानव जीवनमा मात्र होइन पशुप्राणिमा पनि देख्छौ । तर त्यही हुर्केर ठुलो भएको सन्तानले आफू ठुलो भैसकेपछी आफू पनि कुनै समय बच्चा थिए र आमाले यहासम्म ल्याउनु भएको भन्ने बुतुक्कै बिर्सिन्छ । वर्तमानको सफलतामा पुग्दा सम्म आमाकाे योगदान के थियो बिर्सिन्छ अनि आमालाई भुल्छ । धेरै सन्तानले आफ्नै जन्म दिने आमालाई गाली गर्ने, चर्को बोली बोल्ने, कराउने, एक सुक्को पैसा नदिने, बिरामी भएकोबेला उपचार नगर्ने, मिठो मसिनो खाना नदिने, हुदाहुदा बृदाश्रम राख्ने, आमादेखी छुट्टिने जस्ता व्यबहार गर्छन । तिनै सन्तानले दुनियाको अगाडि फुर्ती गर्छन र साथिभाईलाई लाखौ खर्च गर्न तयार हुन्छ्न ।
डिस्को, डान्स, मेलापर्ब, जुवातास, रक्सिमा जति पनि बस्न सक्छ्न, समय दिन सक्छन् तर आफ्नो आमालाई समय दिदैनन । साथीभाईसङग घन्टाै फोनमा गफिनेहरु आमाले फोन गर्दा – म बिजि छु, पछि फोन गर्छु भन्दै फोन काट्छ्न । तर त्यो पछि कहिलै आउदैन । होटेल रेस्टुरेन्टमा हजारौं खर्च गर्न र सेवकलाई हजार टिप्स दिन महान मान्ने सन्तान आफ्नै आमालाई १ सुक्का दिन हिच्किचाउछ्न । सामाजिक संजालमा घन्तौ झुम्मिने सन्तान आफ्नी आमा अगाडि १ मिनेट कुरा गर्न र बस्न मान्दैनन । फेसबुकजस्ता सामाजिक संजालमा साथिभाईका रोमान्टिक तस्बिर लाईक र सेर गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने तिनै सन्तान आफ्नी आमाले खाना पकायर खुवाएको, दुख गरेको, परिश्रम गरेकोमा धन्यवाद दिदैनन, लाईक दिदैन । उल्टै मिठो खाना भएन भन्छ्न । धेरै सन्तान आमाको अगाडि बस्न मान्दैनन, आमा सङग कुरा गर्न मान्दैनन ।
कतिपयले त आफ्नी आमा आफ्नो साथिभाईलाई चिनाउदैनन । आमा फोहोरी छिन भन्दै पन्छिन्छ्न । प्रदेश गएकाे आफन्तलाई घरका अरु सबैले पैसा के कति कमाईस ? मलाई यो र त्यो चिज ल्याईदिनु, मलाई पैसा पठाईदिनु है भन्छ्न तर आमाले कहिले त्यसो भन्दिनन बरु – बाबू खाना खाईसकी के गरिस? समयमै खानु है ? भन्छिन । धन्य आमाको ममता । के तपाईं आमालाई यस्तै गर्नुहुन्छ ? एकछिन छातिमा हात राखेर आमा शब्द पुकार्नुहोस त । कति महान छिन आमा ।
आमाको अर्थ हुन्छ – आँखा नचिम्लुन्जेल माया गर्ने । त्यसैले त पुराना लोकगायक बिरबहादुर भण्डारीले आमाको महिमा सम्झिदै गित गाउछ्न – “हे आमा तिम्रै माया लागेर रुन्छ मन, झर्छ आँसु धरर धरर ” । अरु केही गर्न नसके पनि आमाका लागि र आमाको नामको लागि थोरै मात्र सन्तानले सोच्छ्न । आमाको लागि सेवा गर्ने भनेको आजै हो, अहिलै हो । तपाई अहिले जहाँ भए पनि जस्तो अवस्था भए पनि बहाना नबनाउनुहोस । आमाका लागि काम गर्ने समय अहिले नै उत्तम हो । आउनुहोस आमाको सेवाको खातिर आमालाई सक्दो सेवा गरम, बाचुन्जेल आमालाई दुख पर्न नदिम । मृत्युपछि गरिने खर्च अहिले नै गरम । आमाको लागि तातो, चिसो, फलफूल, उपचार गरम ।
यतिले मात्र पुग्दैन आमालाई सम्मान गरौ, आमालाई सम्मानसहित जीवन जिउन सहयोग गरौ । भगवाणको नाममा गर्ने सेवा आमालाई गरम, आमाको नाममा गरम । यदि तपाई पनि आमाको दशधारा दूध खाएकाे भारा तिर्न मन्जुर हुनुहुन्छ र आमाको सच्चा सन्तान हो भने आमाको नाममा सार्बजनिक स्कुलमा अक्षयकोष स्थापना गर्नुहोस । जसले वर्ष वर्षमा गरिब, अनाथ, जेहेन्दार बिद्यार्थिहरुले छात्रवृत्ति पाउनेछ्न र उनिहरुको भबिस्य उज्वल हुनेछ । तपाईंको नाम पनि प्रत्येक वर्ष मिडियामा आउनेछ, बज्नेछ । अरुले पनि तपाई बाट पाठ सिक्नेछ्न । अरुलाई पाठ सिकाउनु पनि महान हो । तर माथी उल्लिखित सेवा गरिसकेपछि मात्र हामिले दोश्रो क्षेत्रमा सेवा गर्ने हो । आफ्ना सन्तानले गरेको यस्तो पुन्य काम देखेर आमाले संतुष्टिको सास सधैं फेर्निछिन । जय मातादी ।
Previous: बिहिबार थपिए २४२८ कोरोना संक्रमित, ५ जनाको मृत्यु
Next: पत्रकारलाई घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाउन महासंघको आग्रह